တရုတ်နိုင်ငံတွင် အကောင်းဆုံး Cable Tester ပေးသွင်းသူ | Noyafa
NOYAFA အီလက်ထရွန်းနစ်သည် 15 နှစ်ကြာစမ်းသပ်ကိရိယာများနှင့်ကေဘယ်လ်စမ်းသပ်ကိရိယာများကိုအထူးပြုသည်။
Fiber Optic တူရိယာ
Wall Stud စကင်နာ
သင့်ဝါယာကြိုးကျွမ်းကျင်သူသည် သင်လိုအပ်သောအရာကို နားလည်သည်။
Shenzhen Noyafa Electronic Co.,Ltd သည် 15 နှစ်ကြာ စမ်းသပ်ကိရိယာများနှင့် ကေဘယ်ကြိုးစမ်းသပ်သူများအတွက် အထူးပြုပါသည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှကျော်ကြားသောအမှတ်တံဆိပ်များစွာအတွက်ကြွယ်ဝသော ODM / OEM အတွေ့အကြုံနှင့်အတူ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကထုတ်ကုန်များ- ဝိုင်ယာခြေရာခံကိရိယာ၊ LCD ကေဘယ်ကြိုးစမ်းသပ်ကိရိယာ၊ ကေဘယ်အလျားစမ်းသပ်ကိရိယာ၊ CCTV မော်နီတာစမ်းသပ်သူ၊ မြေအောက်ဝါယာကြိုးရှာဖွေကိရိယာ၊ လေဆာအကွာအဝေးရှာဖွေသူနှင့် အခြားစမ်းသပ်ကိရိယာများ။
အကောင်းဆုံး NOYAFA ဘက်စုံသုံး LCD ကေဘယ်ကြိုး အရှည် စမ်းသပ်ကိရိယာ FactoryPrice-NOYAFA
NF-868 အင်္ဂါရပ်များ- ၁။ အဖွင့်၊ တိုတို ၊ လက်ဝါးကပ်တိုင် ၊ ပြောင်းပြန်ချိတ်ဆက်မှု နှင့် ကွဲနေသော ဝါယာကြိုးများ နေရာချထားခြင်းကို စမ်းသပ်ပါ။ ကွန်ရက်ကြိုး၊ coaxial ကေဘယ်၊ တယ်လီဖုန်းကြိုးနှင့် USB ကြိုးတို့ကို တိုင်းတာနိုင်သည်။3။ ဝိုင်ယာကြိုးအမျိုးအစားများထဲမှ ပစ်မှတ်ဝိုင်ယာ သို့မဟုတ် ကေဘယ်ကြိုးကို အမြန်ရှာဖွေရန်။၄။ Exchanger သို့မဟုတ် Router တွင် ကေဘယ်ကို ခြေရာခံသည့်အခါတွင် ညစ်ညမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်သည်။ 5. စကင်န်မုဒ်နှစ်ခု- သာမန်ခလုတ် /PoE ခလုတ်။ 6. ချိန်ညှိခြင်းဒေတာအတွက် သိုလှောင်မှုနှင့် မှတ်ဉာဏ်၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ။၇။ အလိုအလျောက်နှောင့်နှေးပါဝါဖွင့်-ပိတ်နှင့် နောက်ခံအလင်းလုပ်ဆောင်ချက်။
လန်ကြိုးအတွက် NOYAFA Network Cable Tester NF-8108M
LAN cable အတွက် NOYAFA Network Cable Tester NF-8108M OverviewNF-8108M သည် tester (NF-8108) နှင့် 8pcs remote identifier တို့ ပါ၀င်သော ကွန်ရက်ကေဘယ်လ် စမ်းသပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် STP/UTP အတွက် ဝါယာကြိုးအမှားကို စစ်ဆေးနိုင်ပြီး lan cable တိကျမှုအတွက် အရှည်ကို တိုင်းတာနိုင်သည်။ .၎င်းသည် ကွန်ပြူတာကွန်ရက်နှင့် အခြားနယ်ပယ်များတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးချနိုင်သည်။
Noyafa မြေအောက် လွယ်ကူသော လုပ်ဆောင်မှု Multi function NF-820 ကေဘယ်လ်တည်နေရာ
အဓိက အင်္ဂါရပ်များ- ● မြေအောက်ရှိ ကေဘယ်လ် တည်နေရာကို ထောက်လှမ်းပါ၊ သို့မဟုတ် အခြားမမြင်နိုင်သော ကေဘယ်လ် ၏ အကွာအဝေးမှာ 0-2 မီတာ ဖြစ်သည်။ ● Transmitter နှင့် လက်ခံသူအတွက် Signal sensitivity ကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။ (0-2m) ● AC Interference Rejection အပြည့်အစုံဖြင့် ခြေရာခံရန် လွယ်ကူသည် ● တောက်ပြောင်သည့် တိုက်ရိုက်ကေဘယ် (＜220V) ဖြင့် ခြေရာခံရန် လွယ်ကူသည်။ ● လောင်ကျွမ်းမှုကို ရှောင်ရှားနိုင်သော စပယ်ယာတစ်ခု၊ 2-core သို့မဟုတ် multi-core cable ကဲ့သို့သော ခြေရာခံကေဘယ်လ်များ အကျိုးကျေးဇူးများ- ● နားကြပ်သည် ဆူညံသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် အလုပ်လုပ်ရန် ကူညီပေးသည်။ ● ကေဘယ်ကြိုးနှင့် ပလပ်ပေါက်များကို တစ်ချိန်တည်းတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ● ဘက်ထရီနည်းသော အချက်ပြလုပ်ဆောင်ချက်။ ● ထုတ်လွှင့်မှုအတွက် အားပြန်သွင်းနိုင်သော လီသီယမ်ဘက်ထရီ။
NOYAFA NF-8209 LCD မျက်နှာပြင် အတိုင်းအတာ အရှည် Lan Cable POE Wire Checker Cat5 Cat6 Lan Test Network Tool Scan Cable Wiremap Tester
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်-NF-8209 သည် ကွန်ရက် toner နှင့် probe တစ်ခုတည်းတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့် analog အချက်ပြခြင်းကို ပေးဆောင်ရန် မျိုးဆက်သစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်မုဒ်၊ analog မုဒ် နှင့် PoE မုဒ်ကဲ့သို့သော ကေဘယ်ကြိုးများကို ခြေရာခံရန် ရွေးချယ်စရာမုဒ်သုံးမျိုးရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းသည် မည်သည့်အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်မဆို အစွမ်းအထက်ဆုံး ကေဘယ်တည်နေရာနည်းပညာများ တပ်ဆင်ထားသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းတွင်ကေဘယ်အရှည်တိုင်းတာခြင်း၊ ကေဘယ်ချွတ်ယွင်းချက်များစမ်းသပ်ခြင်း၊ PoE စမ်းသပ်ခြင်း၊ hub မှိတ်တုတ်နှင့် NCV လုပ်ဆောင်ချက်တို့ပါဝင်ပြီး ၎င်းတို့အားလုံးသည် ကေဘယ်လ်အင်ဂျင်နီယာများအတွက် မရှိမဖြစ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်စေသည်။ ထုတ်ကုန်လည်ပတ်မှု ၁။ CONT-- STP၊ UTP ကေဘယ်လ်အတွက် စမ်းသပ်ဖွင့်၊ အတို၊ ဖြတ်၊ ect။ အရှည်-- လန်ကြိုးအရှည်ကို တိုင်းတာသည်၊ အကွာအဝေးမှာ 2.5m~200m.3 ဖြစ်သည်။ လန်ကြိုးများကိုရှာဖွေရန်--Analog/Digital/PoE မုဒ်ကို စကင်န်ဖတ်ပါ။4။ PoE-- စံ သို့မဟုတ် စံမဟုတ်သော PoE ခလုတ် (5~60V) အတွက် ရရှိနိုင်သည်၊ PSE အမျိုးအစား၏ AT သို့မဟုတ် AF စံနှုန်းကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။ 5. Flash--- switch/ router ပေါ်ရှိ flashing port light ဖြင့် network port ကိုရှာပါ။Package တွင်ပါဝင်သည်- Transmitter 1pc (ဘက်ထရီမပါဝင် ) Receiver 1pc ရီမုဒ် 1pc Earphone 1pcCable adaptors 1 setCarry bag 1pc User manual 1pc Quality certificate 1pc
သင့်ပရောဂျက်အတွက် သင့်လျော်သော စင်ပြင်ပထုတ်ကုန်များကို ရှာမတွေ့ပါက၊ NOYAFA ၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုအကူအညီကို စမ်းကြည့်ပါ။
Noyafa တွင် ပညာရှင် R&ဆော့ဝဲလ်ပါဝင်သည့် D ဌာန& ဟာ့ဒ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာများ၊ မှိုအင်ဂျင်နီယာများ။ ထို့ကြောင့် ODM& OEM ဝန်ဆောင်မှုများသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် လက်ခံနိုင်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်၊ သုံးစွဲသူများသည် ပစ္စည်းစခရင် သို့မဟုတ် အညွှန်း၊ အရောင်ကွက်၊ အသုံးပြုသူလက်စွဲ သို့မဟုတ် ပုံးများတွင် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်လိုဂိုကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်လိုပါသည်။
အချို့သော သုံးစွဲသူများအတွက်၊ ၎င်းတို့သည် ဂျာမနီ၊ ပိုလန်၊ ရုရှ၊ တူရကီ၊ ကိုရီးယားစသည်ဖြင့် စက်ပစ္စည်းများတွင် မတူညီသောဘာသာစကားများကို အစီအစဉ်ချရန် လိုအပ်နေသေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆော့ဖ်ဝဲလ်အင်ဂျင်နီယာများသည် သုံးစွဲသူများအတွက် ဘာသာစကားပေါင်းစုံကို ပြန်လည်အစီအစဉ်ချနိုင်ပြီး ကမ်းလှမ်းနိုင်ပါသည်။ cable tester ထုတ်လုပ်သူ၊ noyafa cable tester အနေဖြင့် ကောင်းမွန်သော ထုတ်ကုန်များဖြင့် သုံးစွဲသူများ၏ ယုံကြည်မှုကို ရယူလိုက်ပါ။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် R ဖြင့် OEM နှင့် ODM အမိန့်များကိုလက်ခံပါ။& D အဖွဲ့နှင့် အရောင်းအပြီးဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့။
ကုန်ကျစရိတ်ကို ဘတ်ဂျက်ထက် မကျော်လွန်အောင် ထိန်းချုပ်ပါ၊ ထုတ်ကုန်များကို ဈေးကွက်တွင် ပိုမိုယှဉ်ပြိုင်စေပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်လုပ်သည့် ထုတ်ကုန်တိုင်းသည် အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းကို ကျော်ဖြတ်ပြီး လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ "Noah နည်းလမ်း" စက်မှုဇုန်သည် စတုရန်းမီတာ 20000 ကျော်ရှိသည်။
SHENZHEN NOYAFA TECHNOLOGY CO., LIMITED သည် တရုတ်နိုင်ငံ၊ ရှန်ကျန်းရှိ ကေဘယ်ကြိုးကွင်းအတွက် စမ်းသပ်ကိရိယာ ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။
We specialized in the research and development, production and sales of communication network testing, integrated wiring and instrumentation products.The main products are Wire tracker, LCD cable tester, Cable length tester, CCTV monitor tester, POE checker, underground wire locator, Laser range ရှာဖွေသူနှင့် အခြားစမ်းသပ်ကိရိယာများ။
15 နှစ်ကြာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အရောင်းနှင့် အရောင်းအပြီးဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့တွင် အတွေ့အကြုံများစွာကို ဖန်တီးထားပါသည်။ ထုတ်လုပ်သူနှင့်အသုံးပြုသူများ၏ဖွဲ့စည်းမှုအတွက်အလွန်မြင့်မားသောဂုဏ်သတင်း။ လက်ရှိတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံး၊ အထူးသဖြင့်ဥရောပ၊ အာရှသို့တင်ပို့သည်။ ဘယ်အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဖောက်သည်တွေရဲ့ စိတ်ကျေနပ်မှုဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ထာဝရ လိုက်စားမှုနဲ့ ပန်းတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို အထူးသဖြင့် ဥရောပ၊ အာရှသို့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးသို့ တင်ပို့လျက်ရှိပါသည်။ မည်သည့်အချိန်၌ဖြစ်စေ ဖောက်သည်များ၏ စိတ်ကျေနပ်မှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထာဝရလိုက်စားမှုနှင့် ပန်းတိုင်ဖြစ်သည်။
Noyafa သည် 2012 ခုနှစ်မှစတင်၍ Prokit's Industries Co., LTD နှင့် ကာလရှည်ကြာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ နှစ်စဉ်ရောင်းချရငွေမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း 500 ဖြစ်ပြီး၊ အဓိကအားဖြင့် ကေဘယ်စမ်းသပ်စက်၊ ဝါယာကြိုးရှာဖွေသူနှင့် မြေအောက်ဝါယာကြိုးခြေရာခံကိရိယာတို့ဖြစ်သည်။AmazonAmazon သည် Noyafa ၏ အရေးကြီးသောမိတ်ဖက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် Amazon ၏ဖြန့်ဖြူးသူအများအပြားရှိသည်။ ထုတ်ကုန်စီးရီးများတွင် မြေအောက်ဝါယာကြိုးတည်နေရာ၊ ကေဘယ်စမ်းသပ်ကိရိယာ၊ PoE ကေဘယ်ကြိုးစစ်ဆေးကိရိယာ၊ ဝိုင်ယာရှာဖွေစက်၊ လေဆာအကွာအဝေးကို ရှာတွေ့နိုင်သည်။ အရောင်းရဆုံးမှာ NF-8209၊ NF-8601S နှင့် NF-488 ဖြစ်ပြီး နှစ်စဉ်ရောင်းအားသည် တစ်နှစ်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ6သန်းအထိ ရရှိနိုင်ပါသည်။Mobile Tele Systems (MTS) ကျွန်ုပ်တို့သည် ရုရှားနိုင်ငံရှိ Mobile Tele Systems နှင့် ရှည်လျားကောင်းမွန်သော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို 2013 ခုနှစ်မှ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အဓိကအားဖြင့် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ TDR lan ကေဘယ်ကြိုးစမ်းသပ်ကိရိယာ၊ ကွန်ရက်ဝိုင်ယာရှာဖွေစက်၊ မြေအောက်ဝိုင်ယာရှာဖွေစက် စသည်တို့။ RBS Telecom (RBS)ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးကို လွှမ်းခြုံထားပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အစ္စရေးနိုင်ငံရှိ RBS Telecom နှင့်5နှစ်ကြာ ကောင်းမွန်ကောင်းမွန်သော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ပြုလုပ်ထားပြီး အဓိကအားဖြင့် ကေဘယ်စမ်းသပ်ကိရိယာ၊ ဝိုင်ယာကြိုးရှာဖွေသည့်ကိရိယာ မြေအောက်ဝါယာကြိုးခြေရာခံပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ထံမှ Noyafa multi function cable tester NF-8601W စမ်းသပ်ခြင်းဗီဒီယိုကို ဖွင့်ခြင်း
ထုတ်ကုန်တစ်ခုလုံးကြားတွင် ထိပ်တန်းရောင်းသူအဖြစ်။ NF-8601W သည် ၎င်း၏လက်တွေ့အသုံးပြုမှု၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသောစျေးနှုန်းနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရည်အသွေးကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ပရိသတ်အများအပြားကို ရရှိသည်။ ၎င်းသည် ကေဘယ်အဆက်ပြတ်မှု၊ ကေဘယ်အရှည်၊ ကေဘယ်တည်နေရာ၊ PoE နှင့် PING တို့ကိုလည်း စမ်းသပ်နိုင်သည်။ အဝေးထိန်းကိရိယာ 8 ခုဖြင့် တစ်ကြိမ်လျှင် ကေဘယ် 8 ကြိုးကို စမ်းသပ်နိုင်ပြီး အလုပ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် ကူညီပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် Noyafa သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဖောက်သည်များထံမှ ထုတ်ကုန်အချက်အလက်များနှင့် လိုအပ်ချက်များအားလုံးကို စုဆောင်းနိုင်ရန် အကောင်းဆုံးကြိုးစားနေပါသည်။
သင့်တွင် မေးခွန်းများရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ စာရေးပါ။
မူပိုင်ခွင့် © 2022 SHENZHEN NOYAFA ELECTRONIC CO.,LIMITED - www.noyafa.net All Rights Reserved.